Xaflad loo agaasimey ardey ka qalinjebisey kuliyadda Sharciga & Qaynuunka ee Jaamacadda PSU - iftineducation.com
Xaflad loo agaasimey ardey ka qalinjebisey kuliyadda Sharciga & Qaynuunka ee Jaamacadda PSU
iftineducation.com – Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa ka dhacdey Jaamacadda PSU ee magaalada Garowe, xafladda ayaa loo dhigey 23 aredey oo ka qalinjebiyey Kuliyadda Sharciga & Qaynuunka ee Jaamacadda PSU.
Guddoomiyaha Jaamacadda PSU Maxamuud Shiikh Xaamud oo xafladdii qalin-jebinta ka hadley ayaa ugu horeyntii u mahad naqay hay’adda UNDP oo uu sheegay la’aanteed in aysan kuliyaddu socoteen, dhinac kastana ay ka maalgelisey Kuliyadda Sharciga & Qaynuunka, Guddoomiyaha ayaa ka sheekeey qaabkii ay ku bilaabeen, sida in ay hay’adda UNDP mushaharka macalimiinta ay ka bixiyeen saddexdii sano ee hore, wixii ka danbeeyeyna aanu isku filnaaney oo iskabney ayuu yiri.
Qodobka kale ee uu ka hadley Guddoomiyuhu ayaa ahayd in uu la qaybsanayo faraxa ardeyda qalinjebinaysa, una hambalyeynayo, waxaana uu kula dar-daarmey in ay hawl u taalo taas oo ah in ay dadkooda u shaqeeyaan, Dadka Caddaalad ayaa deeqi karta, idinkana taas ayaa la idiinka fadhiya in aad caddaaladda ka shaqeysaan.
Hormuudka Kuliyadda Sharciga iyo Qaynuunka Saalim Siciid Saalim oo isaguna ka mid ahaa dadkii xafladda qalinjebinta ka hadley ayaa sheegay in muddada ardeydaan ay waxabarashada ku jireen ay ahayd 4 sano, maantana la hubo in ay ka shaqeyn karaan arrimaha caddaalada iyo garsoorka.
Sharci-yaqanadan cusub ayaa ku soo beegmaya xili baahi weyn ay ka taagan tahay laamaha caddaalada iyo garsoorka ee Puntland.
Shirka Maamul u sameynta Jubbaland oo lagu wado inuu maanta furmo
Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in wakhti dhow la furayo waddada isku xirta Muqdisho – Baydhabo